The Irrawaddy's Blog: NLD အလံ/တံဆိပ်ကို ကန့်ကွက်သူ ပေါ်လာပြီ
NLD ရဲ့ အလံ နဲ့ တံဆိပ်တို့ကို ကန့်ကွက်ချင်ရင် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။
အခု ကန့်ကွက်မယ့်သူ ပေါ်လာပါပြီ။
ကန့်ကွက်သူကတော့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ( ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) ဆိုတဲ့ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ပါတီရဲ့ အလံနဲ့ တူနေတာကြောင့် ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ကိုရဲထွန်းက ဘီဘီစီသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြောကြားချက်အပြည့်အစုံကို ဘီဘီစီရဲ့ ဒီမနက် ထုတ်လွှင့်ချက်မှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ရဲထွန်းတို့ အလံနှင့် မတူပဲကန့်ကွက်တာ ရူးလို့ပေါ့
The Wild rose said... :
nicko said... :
လေ့လာနေဆဲပါ ဒါပေမယ်တိုင်ပြည်းကိုတိုးတက်ဖွင့်ဖြိုးအောင် ဒီမိုကရေဆီဆိုတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ နှိုင်သံရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန် လက်ရှိအခြေနေတွှေရင်ပြောင်းလဲလာအောင် နှိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးညီညီညာညာ စည်းစည်းလုံးလုံးအရင်ဆုံးဒီမိုကရေဆွဆိုတဲလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအရင်ရောက်ကြိုးစားကြမယ်လို့စိတ်ကူးမရှိကြဘူးလားမသိဘူးလား တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် အသင်းခွဲပါတီဆွဲတွေနဲ့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပြန်ကန့်ကွက်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ နွားကွဲရင်ကျားဆွဲသလိုဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒီမှာ .. ကိုရဲထွန်း .. NLD က ဒေါင်းပုံမဟုတ်ပဲ စာကလေးပုံပြောင်းလိုက်လဲ နိုင်ဦးမှာပဲ ခင်ဗျားတို့ပါတီသာ ဒေါင်းပုံလဲ မနိုင် နောက်ဆုံး လဒပုံပြောင်းတောင် ရှုံးနေဦးမှာပဲ.. အသက်ပဲသေခါနီးနေပြီ .. ခုထိမနာလိုစိတ်နဲ လိုက်တိုက်ခိုက်နေတုန်း ..
THERE IS TOTALLY DIFFERENT BETWEEN NLD FLAG AND YE TUN PARTY FLAG.
NOW YE TUN IS NO PLACE IN POLITICAL GROUND FOR HIM.
THAT'S WHY HE CREATE PROBLEM TO GET FAVOUR FROM GOVERNMENT.
HE IS REALLY BASTARD.
NLD , PLEASE TAKE ACTION ASAP TO YE TUN .
BELIEVE ELECTION COMMISSION WILL DECIDE CORRECTLY THIS TIME TO AVOID DELAY FOR NLD REGISTRATION.
ဒီလိုပါဘဲအကောင်းဘက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအဖျက်ဆိုတာရှိစမြဲပါဘဲ။တူတယ်ဆိုလဲမင်းတို့ ဘဲအပိုင်သိမ်းထားပြီးသေရင်တစ်ခါထဲယူသွားလိုက်ပါတော့ကွာ။NLDကလဲဘယ်သူမှမတူအောင်၊တိုင်ရင်းသားအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုပြီး၊တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုအေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အမေစုပုံသာအလံလုပ်ပြီးပါတီမှတ်ပုံတင်လိုက်ပါတော့။ဒါဆိုဘယ်သူနဲ့ မှမတူတော့ဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ပုံဆိုရင်လာလုနေအုံးမှာစိုးလို့ ပါ။
15011972 said... :
stupid ye tun..
Thura soe said... :
ရဲထွန်း (သို့မဟုတ်)အရူး၊နေရာတကာ ကြွက်ချေးမလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ။ ၈၈ ကျောင်းသားတွေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာအရေးခင်းစဖြစ်ကတည်းက အမေနဲ့သားလိုလက်တွဲလာခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတာ ပြန်ပြီးသတိရစမ်းပါ။ မင်းသားမလုပ်ရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖောက်မဲ့စတိုင်မျိုး မထွင်ချင်စမ်းပါနဲ့ဗျာ။နာမည်လည်းပျက်၊ လူလည်းသိက်ခါကျမဲ့ အလုပ်ပါဗျာ။ကိုယ်ဟာကိုယ်ဆင်ခြင်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါဗျာ။
ရဲထွန်းရှက်တတ်ရင်လဲသေလို့ရတယ်။ အလံက တခြားစီ။ လူတိုင်းနီးပါး နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ မင်းကဘယ်နားမှာသုံးစားမရလို့ ဘိုင်ထေး ဘေးထိုင်နေရတာ။ ဘာလဲထိုင်ရတာညောင်းလို့ ထချင်တာလား။ တော်တော်စိတ်ဓါတ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ကောင်။
ရဲထွန်း.. ..သက်သက်နာမည်ကြီးချင်တာ။ ရဲထွန်းတို့အေးလွင် တို့ကအရင်ကတည်းက NLD ကိုတိုက်ဖို့အရင် အစိုးရလက်ထက် ကတည်းကမွေးထားတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NLD ကို အနှောက်အယှက်ပေး မဲ့ပါတီတွေကို မွေးထားခဲ့တာ။အလံနဲ့ တံဆိပ် အကွာကြီးပါ။ဆင်တူယိုးမှားတောင်မဖြစ်ပါဘူး။ တမင်လုပ်တာ။၈၈ ကျောင်းသားအမည် သုံးထား။ကျောင်းသားဆိုတာ ဘယ်တော့သွေးမကွဲဘူး...တသားတည်းရှိတယ်...NLD က ဘာတံဆိပ်ပြောင်းပြောင်း နိုင်မှာပဲ။အားလုံးက အန်တီဘက်မှာ ရှိနေပြီ။ မင်းတို့ပါတီသာ တနေ့ပြိုကွဲမှာ။
ရဲထွန်း ဟာမင်းသားမလုပ်ရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖောက်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအားလုံးက သူ့ကို ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကျ။
မိတ်ဆွေကောင်းမပီသသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကိုယ့်အမျိုးသားအချင်းချင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုပျက်ပြားအောင် လုပ်သည့်အတွက် (နိုင်ငံရေးသမားဆိုး)ပါ။
အလံနှစ်ခုက လုံးဝကိုကွဲတယ်ကွ သိလား ဘာမှမတူဘူး ခင်ဗျားကြီးအလံက zero နဲ့ ဒေါင်း ဟို NLD အလံက ကြယ်တံခွန် နဲ့ ခွပ်ဒေါင်းဗျ ဒါတောင်မှနားမလည်သေးဘူးလား။ ကိုယ်ဟာကိုနာမည်ကြီးချင်တယ်ဆိုရင် တခြားနည်းနဲရှာပြီးကြီး ဒါမှမဟုတ် ကောင်းအောင်လုပ် ကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ့။
အနှစ် နှစ်ဆယ်လုံးလုံးပေါက်တူးပေါက်တာတစ်ခါမှမကြားရဘူးတဲ့နာမည်က အခုရေတွေ့တော့မှ ငါ့ပေါက်တူးကိုသုံးပါတယ်လို့ အသံကောင်းဟစ်မနေပါနဲ့ဗျ
လိုရင်းက ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့တွန်းအားပေးရမှာကို ကိုယ်ဟာကိုသေသေခြာခြာ စဉ်းစားပါ
နာမည်ကြီးဖို့လား တကယ့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားဖို့လား?
inယာဉ်ထိန်းပိုင်ကား နှင့် အမျိုးအစား ၊ နံပါတ် တူနေသောဦးရဲထွန်ကား ကိုဖမ်းဆီး
စက်တင်လာ ၂၇ ရက်နေ့က သင်ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် BOC မှတ်တိုင် အနီးတွင် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ စီးနင်းလာသော ခဲရောင် ပါဂျဲရိုးကား နှင့် အမျိုးအစားတူ နံပါတ်တူ ကားကိုတွေ့ရှိသဖြင့် နောက်မှ လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ယာဉ်မောင်းက ယာဉ်ကိုထား ပြီး ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် ယာဉ်ကို ထိန်းသိမ်းထား ခဲ့သည်။ အဆိုပါယာဉ် သည် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးသော်လင်းထွန်း ပိုင်ဆိုင်သော ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပြီး သင်ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှ (ပ)၄၆၉ /၂၀၁၁ ဖြင့်အမှု ဖွင့်ထား ကြောင်းသိရသည်။ ထိုအမှု အား သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(၁ ) / ၅(၃) ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ သိရသည်။
(ရဲထွန်း တို့ က လူကိုပြန်ဟစ်နေပြီ လား)
JTmin kyaw said... :
R U Fool ye htun......
အင်းးးး နာမည်တူနေတဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်း ရဲထွန်းကို သတိရပြီး သနားမိတယ်ကွာ၊ တရဲထွန်းထွန်းနဲ့ မိုးမွှန်အောင် အဆဲခံနေရလို့...
ကျချင်ဒူဝါ said... :
ရဲထွန်း.... ရဲတွန်း....ခင်ဗျားက အပြောင် အပျက် တော် တော်သန်တဲ့လူပဲဗျာ။
သယ်ရင် မဲတွန်း မိုက်တယ်ကွာ ပွဲကိုစည်နေတာပဲ။
ရဲထွန်း နှင့် အေးလွင်က အရူးတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ လုပ်စားတွေ။
၁၀ တန်းကျောင်းသားဟောင်း said... :
ထိုင်နေရင်အကောင်း၊ ထသွားမှကျိုးမှန်းသိ တဲ့၊ အကျိုးအကန်းမှန်း သိသူတနေ့တခြားများပြားလာတော့မှာပါ။
အစားမတော်တစ်လုတ်၊ အသွားမတော်တစ်လှမ်းတဲ့၊ အတော်ပါပဲ.. ဟဲ ဟဲ....
Min Min said... :
PC said... :
ကွဲကြပြီ ပြဲကြပြီ .. တို့တော့ပျော်သည် ..ကွဲစမ်း .. အစိပ်စိပ်အမြွာမြွာ )))
maung moe lwin said... :
I also one of 88 student....I never (never )believe aye lwin & ye tun are 88 leaders...
stupid brother........if they become government members , our country will be upside down..........
ဘာကောင်းလဲတော့ ငါမသိဘူး ဒီအချိန်မှာ မင်းလိုကောင်း ကွန့်ကွတ်တာ မပြောနဲ့ ကြိုက်တဲ့ကောင်း ကန့်ကွက် ကန့်ကွက် အားလုံးက အချည်းအနှီးဘဲ။ မင်းကြိုက်တဲ့ အလံကို မင်းယူနိင်တယ်။ မင်းမှာ ဘာမှ အရည်အချင်းမရှိဘဲနဲ့ အမေရိကန်အလံမင်းလက်ထဲ ထည့်လိုက်တောင် အမေရိကန်လူထုက မင်းဘက်က ရပ်တည်မယ်လို့ မင်ထင်သလား။ ဒီအချိန်မှာ မင်းကြိုက်တဲ့ အလံကိုမင်းယူနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းဘက်က ဘယ်သူမှ မရှိဘူးဆိုတာ မင်းသိထားပါ။ မင်းလိုချင်တဲ့ အလံကို အမေစုက ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် ယူသွားလိုက်။ ဒါပေမဲ့ မင်းသိထားဖို့က ဒေါစုလုပ်သမျှကို ကန့်ကွက်ရင်တော့ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ ၇န်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ မင်းဟာမင်း ဘာပါတီခေါင်းဆောင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာပါတီအတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းအတွက်လိုချင်နေတဲ့ အလံတစ်ခုဟာ ငါတို့အတွက်တော့ ဒေါစုခေါင်းမှာ ပန်ဆင်ထားတဲ့ ပန်ကလေးတစ်ပွင့်နဲ့ မလဲနိုင်ဘူး ။ တန်းဖိုးမထားဘူး။ မင်း အမြင်မှန်ရပါစေး
ရဲထွန်း လူတွေကတော့ပြော ကုန်ပြီကွာ မင်းကိုဘယ်သူကမြှောက်ပေးတာလဲ မင်းရဲ့အရည်အချင်း နဲ့ NLDခေါင်းဆောင် နဲ့ ရှင်လိုမှမရတာ မင်းကိုမင်းလဲအသိဘဲလေ ဘာလိုဒီလိုလုပ်ချင်ရတာလဲ နောက်ကိုဆင်ခြဉ် ကွာ မဟုတ်ရင် တော့ပြည်သူကတော့မင်းကို ဘုံပျောက်အောင်လုပ်လိမ့်မယ် နောက်တခုက ဦးစောလက်သစ်တော့ မလုပ်နဲံနာမယ်
မြန်မာပြည်ကြီးအရမ်းနောက်ကျနေပါပြီဗျာ အဲဒီလိုတွေလုပ်မနေကြပါနဲ.တော. ပြည်သူတွေကိုလဲသနားကြပါအုံး၊ ဘယ်သူ.ဘက်မှ လိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်လုပ်နေတဲ.သူတွေကိုအနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ. ဒီလိုအခြေနေမျိုးလေးရောက်အောင်တော်တော်စောင်.နေခဲ.ရတာပါ အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ. အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဝိုင်းရံပေးလိုက်ကြပါလား တောင်းပန်တာပါ အရမ်းလွပ်လပ်ချမ်းသာချင်နေပြီဗျ....
့henry said... :
nay said... :
I agree nicko comment.
Yes the flat design is not major .
Unity is major for our country development.
We all should be united and appreciate peace for others.
I do assist nicko.
ko saw said... :
ရဲထွန်း... ရဲထွန်း ...ရူးပါ့ကွာ
ဦးစော လက်သစ် ရဲထွန်း နာချင်ပြီထင်တယ်...ဒီလူကြီး ဘယ်ကြောင်က ထွက်လာ ပြန်ပြီလဲ သတိထားနေပေတော့ ရဲထွန်းရေ
သူ့ခမျာ မေတ္တာအတော်ရနေပါပြီ..ဘာမက်လုံးကြောင့်များ ဒီလူ အခုလို မေတ္တာခံယူဖို့ အစီအစဉ် စိတ်ကူး ပေါ်လာရပါလိမ့်?
၈၈ တုန်းက ၇ တန်းကျောင်းသား said... :
ဖုန်မထ ပဲ အိုင်ပျက်ရုံသာ ရှိတော့ မပေါ့ ရဲထွန်းရာမ ရယ်... ငှဲငှဲငှဲ
hm said... :
ဇတ်ဆ၇ာ said... :
လူထု မေတ္တာ ခံယူမဲ့ သားသားလေး ၇ဲ၇ဲထွန်းပါခင်ဗျာ....
ကဲ...၇ွာစားေ၇ သူခိုး ဆိုင်းတီး......လူဟစ်..ဟစ်ပြီး ကမယ်
....တုနဲ့ တဲ့နဲ့ မျက်နှာပြောင်.....တဲ့ နဲ့.....တဲ့နဲ့...မျက်နှာပြောင်...........ပြောင်...ပြောင်...ပြောင်
ကန့်ကွက်တဲ့လူကတော့ သိပ်မပြည့်တဲ့ လူတွေထဲကပဲ ဖြစ်မယ်
ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်တယ် တစ်ကမ္ဘာလုံးလေးစားကြတဲ့ လူလည်းဖြစ်တယ် ဒီအချိန်မှာ နဲနဲရ နဲနဲ ၀င်နွဲရမယ့် အချိန်ဖြစ်နေပြီ ခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နိုင်သလောက် ကို ကျွန်တော်တို့က ဖေးမှကူညီရမယ် သူ့ကို ယုံကြည်မှုအပြည်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရမယ် တချိန်တည်း ၀ုန်းဒိုင်း ပြောင်းလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး တစ်လနည်းနည်း တစ်နှစ်နည်းနည်းပြောင်းလဲပစ်ရမယ် ဒီလိုမှမလုပ်ရင် ဦးဆောင်မယ့်လူတွေ အသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီ လုပ်နိုင်တုန်း လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အချိန်တွေကို မဖြုန်းပါနဲ့ ဦးနှောက်သုံးပြီးမှ ပြောပါ.....................
nelson nay tun said... :
ဘယ်အမှတ်အသားဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့် ၇ှိပြီးသား အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ တထေ၇ာတဲတူမနေ၇င်၊ ကန့် ကွက်ဘို့ မလိုပါဘူး၊ ဥပမာ... ကြယ်..ဆိုပါစို့ ၊ ကြယ်ဆိုတာအများဆိုင်အမှတ်အသားပါ၊ အဖွဲ့ အစည်း၊ နိုင်ငံတော်တော်များများက ကြယ် ကိုသုံးကြပါတယ်။ဒါပေမယ် ကြယ် ကိုသုံးတဲ့ အခါမှာကိုယ့် အယူအဆနဲ့ ကိုယ်...ကြယ် ၇ဲ့ ပမာဏ၊ အပွင့် အေ၇အတွက်၊ ကြယ် ၇ဲ့ အနေအထား၊ ကြယ်၇ဲ့ အေ၇ာင်ေ၇ွးချယ်မှုမှာကွာသွားပါတယ်၊ ဒီ နေ၇ာမှာ ကြယ် ကို ဘယ်သူမူပိုင်ဖြစ်လို့ ကန့် ကွက်တယ်ဆိုတာမ၇ှိခဲ့ ဘူး၊ ၇ှိလဲ၇ှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ဒီပေါ်မှာဘယ်သူမှလဲအငြင်းမပွါးကြပါဘူး၊ အဲကန့် ကွက်တယ်ဆို၇င်တော့ ဒါဟာ မေ၇ာင်၇ာဆီလူးခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ သက်သက်မဲ့ လူသိများအောင်၊ လုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်၊ နိုင်လဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Robin Wilson said... :
KANINAR YE TUN
ထင်သာမြင်သာကြီးပါ ကိုရဲထွန်း။။။။ပြည်သူမုန်းမဲ့ အလုပ် ဆက်မလုပ်နဲ့ သားသမီးမျက်နှာ ငယ်ရလေ့မယ် လူပုံလည်မှာ....
ဟိန်းထက်စံ said... :
ခဲ့ရတယ်။ အခုလည်းဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိနေဆဲပဲ။ လူဖြစ်
ကျောင်းသားဟောင်းတယောက် said... :
ရဲထွန်းဆိုတဲ. ကျောင်းသားရေ မင်းတယောက်တည်းကျောင်းသားမဟုတ်ဘူး လူတိုင်းမူကြိုက တက်ခဲ.တဲ.သူတွေချည်းပဲ လူတိုင်းအသုံးပြုလို.ရတယ် ကွာ ရှင်းလား..၊ အဓိကမဟုတ်တာတွေ လာမာန်ထမနေနဲ. နိုင်ငံကောင်းဖို.ဆိုတဲ. ဦးတည်ချက်နဲ.တည်.တည်.လျှောက်ဖို.စဉ်းစား ကြားလား ငနွားရဲ. ၊ငါ.ရှေ.မှာ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ကျောင်းသားသစ်တွေနဲ.လာလာရွပိုးထမနေနဲ. နိုင်ငံကောင်းဖို.ကိုစဉ်းစား လူတွေကို ဘယ်လိုကောင်းဖို.လုပ်ပေးရမလဲ စဉ်းစား ဟိုလူ.ကန်.လန်.လိုက်လုပ် ဒီလူ.ကန်.လန်.လိုက်လုပ် လုပ်မနေနဲ. မသာရဲ.၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာလဲ ငါ နားမလည်ဘူး ၊နားလည်းမလည်ချင်ဘူး ၊ဒီအလံကိုမင်းအဖေကလည်းစာချုပ်စာတန်းနဲ.အမွေပေးခဲ.တာမဟုတ်ဘူး ၊ သိပ်ကြိုက်ရင်တော.ပြော မင်းသေရင် အခေါင်းပေါ်ခြုံပေးဖို. တခုတော.ချန်ထားပေးမယ် ၊ငါသိတာ ငါ.ဘေးကလူတွေ ကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီမယ် ဆိုတဲ. အသိနဲ. ငါကလည်းရပ်တည်လာတဲ.ကောင် ၊ဒါ.ကြောင်.မင်းအဆင်ပြေအောင် ငါအလံတခုတော.စီစဉ်ပေးမှာပါ စိတ်ချ ၊ မင်းတို.လို နေရာတကာကျောင်းသားကျောင်းသား ဆိုပြီးလမ်းပိတ်လျှောက်တဲ.ကောင်တွေ ငါ နားအုံ တီးဖူးတယ် ကျောင်းသားသိက္ခာကျအောင်လုပ်တဲ.ကောင်တွေ မင်းတို.ထက်ဟောင်းတာမှ မူကြိုကို ၂နှစ်နေခဲ.တာကွ(အသက်မပြည်.ပဲ ကျောင်းတက်ချင်လွန်းလို.) ရှင်းတယ်နော် မင်းနားအုံအတီးမခံချင်ရင် မင်းပါးစပ်ပိတ်တော...... ဟောင်းတာမှ ကျောင်းထိုင်ထက်ဟောင်းတဲ.ကောင်ကွ
ရဲထွန်း ... နာမည်ကြီးချင်လို့ စတန့်ထွင်တာလားမသိ ...
ခွပ်ဒေါင်းဆိုတာ သူ့အဖေ အမွေပေးခဲ့တဲ့ သူတို့ ဘိုးဘွားပိုင် အမွေလို့များ ထင်နေလားမသိ ..
၂ဝ၁ဝ တုန်းက သူတို့ အလံနဲ့ တံဆိပ်ကို သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးတဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် အလံနဲ့ တူလို့ ကန့်ကွက်ကြဖူးတယ် ...်သူ့အကိုအေးလွင်လည်း သုံးရောင်ခြယ် ကဒေါင်းအလံ သုံးဖို့ လုပ်သေးတယ်ထင်တယ် ....
NLD ရဲ့ အလံနဲ့ ဒီအမှတ်အသားဟာ ခုမှစသုံးတာ မဟုတ်မှန်း လူတိုင်းသိတယ် ... ၁၉၉ဝ တုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ခမောက်တံဆိပ် အမှတ်အသားကလည်း မောင်ပိုင်စီးခံလိုက်ရပြီ ... အခုတံဆိပ်က စဖွဲ့ကတည်းက ရင်ထိုး အမှတ်သားတံဆိပ် အဖြစ် တလျှောက်လုံးသုံးလာတာ .... NLD က ခွပ်ဒေါင်းကို သုံးခြင်းဟာ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သုံးခဲ့တာပါ ... နောက် NLD ထဲမှာ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကြတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ အများဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြတယ် အခုထိ ကျောင်းသားလူငယ် မျိုးဆက်သစ်တွေ ပါဝင်နေကြဆဲပဲ ...
ရဲထွန်း ရေ မင်းတို့သုံးနေတဲ့ တံဆိပ်တွေသာ .... NLD နဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် ..... ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို အလံက ခွပ်ဒေါင်းအမှတ်အသား အသုံးချပြီး လူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် ... ၈၈ ကျောင်းသား အမည်သုံးပြီး ရေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တာပါကွာ ...
NLD ကသုံးခဲ့တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းဟာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက သုံးတဲ့ခွပ်ဒေါင်းလို စက်ဝိုင်းမပါတာရယ် အဖြူရောင် ကြယ်ဖြူကြီးတပွင့်လဲ ပါ ပါတယ်ကွာ ... အကွာကြီးပါ ...
ပြောမရဘူး တော်ကြာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစိသစ်ပါတီ တို့က သူတို့နာမည်နဲ့ ဆင်တူဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီး တရားစွဲဦးမလားမသိဘူး ...
ကော်မရှင်က ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကြည့်ရသေးတာပေ့ါ ... ပြောမဲ့သာ ပြောရတာ လက်ရှိ အစိုးရက NCGUB ကသုံးခဲ့တဲ့ အလံနဲ့ တပုံစံတည်း အလံကို အသုံးပြုခဲ့တာ ဆိုတော့ ....
ဒီမိုကရေစီပဲဗျာ ကိုယ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လပ်
Yae` tun.you are not actually leader of our country ..you must know yourself what you actually did for Myanmar people form past to now.Nothing right..?Can u tell our myanmar what was you doing before.?
happy life said... :
You are not enough to showaway of our's people.Shame on you.